Iyo yakanakisa yazvino bhangi inoisa pamusika | Ehupfumi Zvemari
Iyo Yakanakisa Bhangi Inoisa
Susana Maria Urbano Mateos | | Deposits
2 Facto dhipoziti
3 Bfs dhipoziti
4 Rimwe gore kurima dhipoziti
6 1 gore mwari Bhangi dhipoziti
7 1 gore dhipoziti J & T Banka (+25 €)
8 Payroll bhonasi dhipoziti
9 Self Deposit, kubva kuSelf Bank
10 2-gore dhipoziti kubva kuJ & T Banka
11 Vhura dhipoziti gumi nematanhatu mwedzi
12 2 gore euram dhipoziti
13 Orange kuisa 2 mwedzi
Rudzi urwu rwekuisa mari ndeimwe yeiyo mari inokwezva inowoneka pamusika uye kuti iwe unogona zvakare kunakidzwa yakatarwa izwi. Muchokwadi, iwe unogona kunakidzwa nekudzoka neinosvika 1,25 APR, iri pamusoro pevhareji kana zvasvika kune iyo nani chimbadzo Ivo vanopa madipoziti akafanana neizvi.
Pakati pezvakanaka zvayinopa, pane zvakare mukana wekuti vatengi vayo vasarudze ne nguva iri pakati pemakore matatu kusvika mashanu. Izvi zvinofarira mikana yevatengi yekuwana purofiti yepamusoro inogona kusvika kusvika 1,50 APR.
Este 12-mwedzi dhipoziti mwero Icho chimiro cheyakagadziriswa-term dhipoziti iyo inopihwa kune vanoisira account nekudzoka kwe1% APR. Kana mutengi mutsva achida tsvaga urwu rudzi rwechipoIwe unongofanirwa kuita investa inokwana zviuru makumi mashanu euros ine yakakwira mazana mashanu ezviuru euros.
Pakati pehukuru hunhu hwerudzi urwu rwechipo, iwe unogona kuve ne mukana wekugadzirisa makota matatu zvese zvido zvakagadzirwa. Uye zvakare, iyo account inosanganisirwa ichave yemahara chero mhando yekomisheni uye haizovandudzwa otomatiki kuti iwe ugone kuchengetedza izere kutonga kwezvaunoita.
Sezvo nezvose Spanish mabhangi BFS Icho chiri muSpanish dhipoziti garandi fund.
Rimwe gore kurima dhipoziti
Iyi yakagadziriswa-term dhipoziti inotengeswa ne Chikwereti Agricole Mutengi Mari, iyo inopa vese vatengi 1% APR mukati megore rimwe chete kune vanhu vese vanoita mari pakati pe5.000 ne500.000 euros. Zvese zvido zvakagadzirwa mukati memwedzi gumi nemiviri inotevera, zvichatorwa kuaccount inosanganisirwa neyekutanga kudzamara zuva rekupera rasvika zuva rekupera.
Chikwereti Agricole Mutengi Mari Iyo ndeimwe yemabhangi ayo akabatana neFrance dhipoziti vimbiso yemari. Iyi fund system ine vimbiso yekupa 100.000 euros pachinhu chimwe nechimwe mubati muchiitiko chekuti sangano rinorega kuve nemari.
Winzink ndeimwe yeiyo mari yakawanda inobatsira pamusika iyo vatengi vanopihwa iyo mwero wekudzoka kwe0.90 APR uye izvo zvine mabhenefiti anoshamisa akadai sekugadziriswa kwechido panguva yekukura uye zvakare kumutsidzirwa kunoitika otomatiki kana nguva yapera.
El WiZink 14-mwedzi dhipoziti inopa kudzoka kwe0,90% APR. Ino yakatarwa nguva inoonekwa nekuve nekugadziriswa kwezvido pakukura uye kuvandudzwa kwayo kunoitika otomatiki kana nguva yayo yapera, iyo purofiti iyo ichagadzwa zvakare nebhangi kwetemu imwe chete. Kuti uwane rudzi urwu rwechipo, iwe unofanirwa kunge uine anosvika ma12.00 euros ane anosvika 250.000 euros. Muchiitiko chekuti mutengi nyowani achida kuwana urwu rudzi rwechipo, vanofanirwa zvakare kuvhura iyo wizink yekuchengetedza account.
Kana tichida kushandisa 14-mwedzi dhipoziti, Ichi chiine chigadzirwa chakabatanidzwa kubva kwaunogona kunakidzwa nekuwana purofiti ye0.75% APR. Iyi account haina yemhando ipi neipi yekomisheni uye zvakare inokupa iwe mukana wekuve nemari panguva yaunenge uchiida.
Ndiyo imwe yemadhipatimendi akatsiga, nekuti kana paine chero dambudziko, bhizinesi rinotsigirwa neSpanish dhipoziti garandi fund, zvinoreva kuti kana iro bhizinesi raive nematambudziko e solvency, anosvika zana angavharwa zviuru zvemadhora kubhangi uye mubati.
1 gore mwari Bhangi dhipoziti
Este Bank Alior dhipoziti mhando Iyo ine purofiti inosvika kusvika .90% uye zvakare iri dhipoziti iyo isina otomatiki kuvandudzwa. Uye zvakare, ino sisitimu ine purofiti yakakwira iyo inogona kuwanikwa nekungova mutengi. Iyi sisitimu inopawo bhonasi yekugamuchira ingangoita makumi maviri nemashanu euros. Izvo iwe zvaunofanirwa kuita kuti uwane icho kumutumira iye email neyakaomeswa uye mumazuva gumi nemana anotevera mari ichaiswa muaccount yako.
Sangano rinotsigirwa ne Poland dhipoziti homwe iyo inosvika kusvika ku100.000 euros.
1 gore dhipoziti J & T Banka (+25 €)
Iyi dhipoziti inosvika kumwedzi gumi nembiri ye Banka ine yakagadziriswa term system Naiyo iwe yaunogona kuwana kudzoka kwe0.70% APR kune vanhu vanoisa mari ingangoita 10.000 euros. Kunze kwaizvozvo, kana iwe uri mutengi mutsva mubato, unogona kunakidzwa nebhonasi yekugamuchira iyo ichave makumi maviri nemashanu euros. Iyi bhonasi inopihwa naRaisin, saka kuti uwane izvi, uchafanirwa kutumira email kwavari uye kana vachinge vaona kuti mamiriro ese azadzikiswa, unowana bhonasi yekugamuchira nemari iri muaccount yako.
Iyi dhipoziti ndeyemwedzi gumi nembiri ine 12% inivhesitimendi yakachengeteka sezvo sangano riri kutsigirwa ne Czech vimbiso fund.
Payroll bhonasi dhipoziti
Este bhonasi dhipoziti mhando Iyo inosvika ku0,75%, asi kuti uwane iyo, zviviri zvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa. Yokutanga iri kuburikidza nemubhadharo unosvika mazana matanhatu emaeuro kana kuva nepenjeni inosvika mazana matatu. Zvese zvikwereti zvakananga zvinofanirwa kuchengetwa mubato kwemwedzi ingangosvika gumi nematanhatu. Iwo marisiti anotenderwa igasi, mvura, magetsi, runhare kana internet.
Self Deposit, kubva kuSelf Bank
El kuzvidzora Icho chimwe cheanobatsira kwazvo kuchengetedza mabhangi zvigadzirwa zvevanhu vari kutsvaga kushambadzira kwakanaka mumusika wemari.
Iyi dhipoziti inokwanisa kupa kusvika 2% APR pamwedzi mitatu.
2-gore dhipoziti kubva kuJ & T Banka
El 2-gore dhipoziti kubva kuJ & T Banka Inguva yakatarwa iyo inobhadhara 0,80% APR. Iyi dhipoziti inogona kubvumidzwa kubva ku10.000 euros uye kusvika ku100.000 euros, 100% online. Uye zvakare, iyi dhipoziti inogona kugadziridzwa nematemu anotangira pamwedzi mipfumbamwe kusvika pamakore mashanu, ichikwanisa kuwana mhindu yakawanda kana shoma zvichienderana neshoko rakasarudzwa.
Imwe yemabhenefiti echigadzirwa ichi ndeyekuti havana otomatiki kuvandudzwa, saka hatifanire kunetseka kana tikarasikirwa nezuva rekupera uye tisina kutora mari. Iyi dhipoziti yakachengeteka zvachose, sezvo iine kufukidzwa kweCzech Deposit Guarantee Fund, iyo inovhara kusvika ku100.000 euros.
Vhura dhipoziti gumi nematanhatu mwedzi
Este 13-mwedzi dhipoziti mwero Iine purofiti yakakwira inosvika pa0.40%, pasina iyo bhizimusi inofanirwa kubhadharisa chero mhando yekomisheni. Uye zvakare, ivo vane mukana wekubvisa mari yavakaisa chero nguva.
Kana zvikaitika kuti munhu ari kuzotora dhipoziti mutengi mutsva, vanogona kusarudza iyo openbank inogamuchirwa account. Iyi account yekuchengetedza inopa vatengi kufarira kwekusimudzira kusvika 1,75%.
2 gore euram dhipoziti
Este dhipoziti inopa kudzoka kwakakwira kunosvika kunosvika 1.05% Uine mukana wakakura wekugona kunakidzwa nekukanzurwa kwekutanga uye kunyangwe kugona kuwana urwu rudzi rwe dhipoziti nemari yekudyara inosvika zviuru zvishanu euros.
El Euram dhipoziti Iyo ine vimbiso yakapetwa kaviri kune vese vatengi, nekuti rudzi urwu rwe dhipoziti runotsigirwa ne garandi yemari kubva kuAustralia uye zvakare, nehukuru solvency iyo inesangano inayo. Vatengi vatsva vanoda kuwana iyo dhipoziti vanofanirwa kuvhura account mune yakaomeswa. Izvi zvichavapa rwechipiri kubatsirwa umo ivo vanogashira inosvika makumi mashanu euros yekuva mutengi; Kuti ukwanise kunakidzwa nemari iyi, iwe unongofanirwa kutumira email kune akaomeswa uye iwe unozokwanisa kunakidzwa nemari iri muaccount yako munguva ingangoita mazuva gumi nemana.
Orange kuisa 2 mwedzi
Iyi dhipoziti ine purofiti yakakura inosvika 1.00% mumwedzi miviri. Ichi chinhu chinongokodzera vatengi vatsva uye kana mwedzi miviri yapera mari yacho ichaiswa muakaundi yevatengi yeorenji, uko ichanakirwa kwenguva isingaverengeke ye0.10.
Pakati pezvakanaka zveakaundi yeorenji ndezvekuti hushoma huwandu haudiwe kuti ugone kuanakidzwa uye zvakare inobvumidza kukanzurwa nekukasira pasina mutengi kubhadhara muripo.
Vese vatengi vatsva veichi chikamu vanotsigirwa neiyo Holándes dhipoziti vimbiso fund. Izvi zvichavhurwa kubva pazuva rekutanga iro bhangi riine matambudziko e solvency, iine anosvika zviuru zviuru zana zvemadhora pamuridzi uye pabhangi
Sezvauri kuona, huwandu hwemadhipoiti iwe hwaunogona kuwana mumusika neepamusoro purofiti hwakasiyana kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Deposits » Iyo Yakanakisa Bhangi Inoisa
Iko kuwedzera kwemari kunobatsira vatyairi here?
Ko kana dhora richiwa zvakanyanya?